भोलि मङ्सिर १ गते आइतबार तपाईको राशिअनुसार कस्तो छ भाग्यफल ? पढ्नुहोस – Jaljala Online
भोलि मङ्सिर १ गते आइतबार तपाईको राशिअनुसार कस्तो छ भाग्यफल ? पढ्नुहोस
वि.सं.२०७६ साल मंसिर ०१ गते । आईतबार । ईश्वी सन् २०१९ नोभेम्बर १७ तारिख । नेपाल संवत् ११४० । परिधावी संवत्सर । दक्षिणायन । शरद ऋतु । श्रीशाके १९४१ । मार्गकृष्ण पक्ष । तिथि पंचमी,२७ घडी २६ पला,बेलुकी ०५ बजेर २५ मिनेट उप्रान्त षष्ठी । नक्षत्र पुनर्वशु,४१ घडी ०१ पला,बेलुकी १० बजेर ५१ मिनेट उप्रान्त तिष्य । योग शुभ ५२ घडी ४२ पला,रातको ०३ बजेर ३२ मिनेट उप्रान्त शुक्ल । करण तैतिल,साझ ०५ बजेर २५ मिनेट उप्रान्त गर,रातको ०४ बजेर ३९ मिनेट उप्रान्त वणिज । आनन्दादिमा ध्वज योग । चन्द्रराशि मिथुन,बेलुकी ०५ बजेर ०४ मिनेट उप्रान्त कर्कट । काठमाडौंमा सूर्योदय ०६ बजेर २६ मिनेट,सूर्यास्त बेलुकी ०५ बजेर ०९ मिनेट । दिनमान २६ घडी ४६ पला । मार्ग सङ्क्रान्ति। सूर्य वृश्चिक राशिमा मध्यान्ह १२ बजेर ३१ मिनेटमा प्रवेश । विद्यार्थी दिवस ।
आफन्त तथा आत्मिय मित्रहरु सँग टाडिएर लामो दुरिको यात्रा गर्नुपदा मन बिचलित हुनेछ । बिद्या तथा प्र्रतिष्पर्धामा प्रतिष्पर्धिभन्दा कमजोर साबित होईनेछ । आफन्त तथा अग्र्रज ब्याक्तित्वहरु सँग सैद्धान्तिक बिषयमा राय बाजिनेछ भने घर परिवार तथा आफन्तहरुबाट भनेजस्तो सहयोग नपाईने हुँदा दिगो काम गर्ने अवसर गुम्नेछ । साझबाट समय राम्रो रहेकोले व्यापारमा बृद्धि हुनेछ ।
पढाई लेखाईमा तपाईको नाम अग्र स्थानमा आउने हुनाले आत्मबल बढेर जानेछ । पहिले गरिएका लगानिबाट आम्दानि हुन थाल्नेछ भने नया ठाउमा लागनि गर्ने बाताबरण बन्नेछ । शिक्षा तथा बौद्धिकताको प्रयोग गरि क्षमता बढाउन सकिने तथा बित्तिय क्षेत्रमा गरिएको लगानि फस्टाएर जानेछ । पैत्रिक धन हात लागि हुने योग रहेकोछ भने पैत्रिक सम्पतिको प्रयोग मार्फत मनग्गे आम्दानि हुनेछ । साझपख लामो दुरिको यात्रा हुनेछ ।
धन तथा पैत्रिक सम्पतिको प्रयोग तथा परिचालन गर्दा ख्याल गर्नुहोला रुपैया पैसा फस्न सक्छ । प्रेममा एक अर्कालाई सहयोग गर्दा गर्दै अबिश्वषस बढ्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । सहयोग गर्ने भन्दा आश्वासन बाढ्नेहरु धेरै भेटिनेछन् । स्वास्थ्यमा समस्या आई शुरु गरेका कामहरु सम्पादन गर्न सकिने अवस्था रहने छैन । साझबाट समय राम्रो रहेकोले पैत्रिक सम्पतिको प्रयोग मार्फत आम्दानि बढाउन सकिनेछ ।
संकट ब्याबस्थापनको लागि चालिएका कदम हरु निरर्थक हुनेछन् । रुपैया पैसा लेनदेन तथा सापटि लिने दिने काम नगर्नुहोला रुपैया पैसाकै कारण साथिभाई तथा आफन्त सँग मनमुटाब बढ्नेछ । नयाँ काम गर्नुभन्दा पुरानै कामलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ भने बैक तथा बित्तिय सस्थामा गरिएको लगानि भने फस्टाएर जानेछ । साझपख धार्मिक तथा शैक्षिक यात्राको प्रवल सम्भावना रहेकोछ ।
माया प्रेमको बन्धन कसिलो हुँनुको साथै पति पत्निबिचको सम्बन्धमा थप सुमधुरता बढेर जानेछ । भौतिक सम्पति तथा उपहार प्राप्तिको योग रहेकोछ । पारिवारिक माहोल तथा शुभ मांगलिक कार्यमा सहभागि भई मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवरि प्राप्त हुनेछ । एकल तथा साझेदारि व्यावसायमा लगानि गरि प्रशस्त आम्दानि गर्न सकिनेछ भने उपलब्धिमुलक व्यावसायिक यात्रा हुनेछ । साझबाट आफन्तसँग मनमुटाब सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न ।
काममा अप्रत्यासित बाधा ब्याबधान आईलाग्ने तथा ठुलो श्रम खर्च गर्नुपर्ने हुन सक्छ ख्याल गर्नुहोला । समयको र कामको तालमेल नमिल्दा कामहरु समयमा सकाउँन मुस्किल पर्नेछ । अध्ययन अध्यापनमा खासै मन नजाने हुँदा पढाई लेखाईमा अरु भन्दा पछि परिनेछ । बौद्धिक ब्यात्तित्व तथा अग्रजहरुसँग सैद्धान्तिक मतभेद रहनेछ । साझबाट व्यापारमा बृद्धि हुने योग रहेकोछ ।
आमा वा आमा सोसरहका मानिसको सल्लाह तथा सुझाबलाई शिरोधार्य गर्दै अगाडि बढ्न सके उपलब्धि हुँने काम गर्न सकिनेछ । कृषि तथा पशुपान व्यावसायमा लगानि बढाई मनग्गे आम्दानि गर्न सकिनेछ । प्रेम प्रशङगमा खुलेर रम्ने समय नरहेकोले ध्यान दिनुहोला । साझबाट समय राम्रो रहेकोले पढाई लेखाई मन जाने तथा नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ ।
साप्ताहिक राशिफल : मंसिर ०१ गते आईतबारदेखी मंसिर ०७ गते शनिबारसम्मको
मास प्रिन्टर नल्याएपछि भारतीय प्रिन्टसमाथि विभागले लियो यस्तो एक्सन
Posted on July 15, 2019 July 15, 2019 Author Jaljala Online
असार ३०, काठमाडौं । तोकिएको समयमा स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने कार्ड र मास प्रिन्टर नआएपछि यातायात व्यवस्था विभागले भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई ‘फाइन’ तिराउन सुरू गरेको छ । यो खबर हामीले बाह्रखरी अनलाइनबाट लिएका हौ । विभागले ७५ दिनको म्याद राखेर एकथान मास प्रिन्टर र १० लाख कार्डको ठेक्का लगाएको थियो । मास प्रिन्टर विभाग आइपुग्ने […]
Posted on June 3, 2019 June 3, 2019 Author Jaljala Online
जेठ २०, रुपन्देही । रुपन्देही–रुपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिका–१ स्थित भुजौली बस्ने १८ वर्षीया सबनम नाउँको सोही स्थानका २३ वर्षीय असिरुद्दिन मुसलमानसँग प्रेम सम्बन्ध रहेको थियो । यो खबर तेजेन्द्र के.सी.ले रातोपाटीमा लेखेका छन् । उनीहरु विगत छ महिनादेखि मोवाइलमार्फत सम्पर्क हुँदै भेटघाट बाक्लिएको थियो । वैशाख महिनाको अन्तिमतिर सबनम नाउँको घरमा बिहेको कुरा चल्यो । सामान्य […]